Zuva: Ndira 16, 2020
Gurukota rezveMagetsi neZvemukati menyika, VaFatih Dönmez, vanoti simba remagetsi einjini dzakavakirwa mukati rakasangana kubva mumafuta, asi mota dzemagetsi dzawanda. Dönmez, 2022-2023't Turkey kuti zvipfuwo motokari yemagetsi mumigwagwa [More ...]
Ministry of Transport and Infitution Sabiha Gokcen Airport haingabvumirwe imwe ndege kuenda kune dzakataurwa ndege. SözcüMaererano nenhau; Kapasite Kushaikwa kwehuwandu uye traffic seyenyonganiso yesarudzo [More ...]
Cahit Turhan, Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu uye Nharaunda, vakataura kuti vatanga chirongwa cheCarbonless Airport uye matanho anotorwa nekudziya kwepasi rose nekushanduka kwemamiriro ekunze zvinoita kuti zvizvarwa zvinotevera zvisiye nyika inozara uye kupa kurongeka kwendege. [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipality Health and Social Services Dhipatimendi Vakaremara uye Nevakuru Services Branch Directorate yakaona chiitiko chine musoro kune vana vasina kutadza kuona. Mumaonero aya, vadzidzi vakaremara muDarica Peace Primary School [More ...]
MuAliciaa, uko kwekufambisa kunopihwa nemadhibus, kune matambudziko mukufambisa kwemadhorobha. Vafambi vanonyunyuta nemari yekuenda, mafambiro, uye nekufamba netsoka. Mazana evashandi nevashandi vehurumende vari munzira kubva kunzvimbo dziri kure mazuva ese kuenda kubasa [More ...]
TransportationPark, inoshanda pasi pekubatana kweKocaeli Metropolitan Municipality Transportation neTraffic Management, inoronga nzendo gumi nematanhatu dzeFinal Ongororo yeOkuvhurwa Kwemhando Yedzidzo Fall Nguva ya 18 na 19 Ndira. [More ...]
Vagadziri vemari vanotenga zvivakwa zvekutenga renji izvozvi vava kuneta nekutarisana nematambudziko mazhinji nevarimi. Aya ma investor, asina nguva, ari kutsvaga mhinduro kune vatariri vezvivakwa vanopa vashoma nhamba yevashandi vekutarisira mabasa. [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipality Dhipatimendi Rezvekufambisa uye nezvekufambiswa kweDhipatimendi Rezvekutakurwa Kwevanhu, mukuwirirana nezvinodiwa nevagari kunoita zvidzoreso zvinodikanwa munzira uye nenguva dzemitsetse iripo. Mumamiriro ezvinhu aya, 510 uye 525 [More ...]
Iko kuzivisa kwenyoro nyowani yeiyo Üçyol - Buca Metro purojekiti, inozivikanwa seyenzi huru yekudyara mu İzmir nhoroondo, yakaburitswa pawebsite yeEuropean Bank Yekuvakazve uye Kubudirira. Chikumbiro chematarenda epasi rose uye gore rino [More ...]
Vashandi vekuchengetedza vanobatana neVizyon Group Management Company, mumwe wevabatsiri ve Şenbay-Kolin-Kalyon Production Partnership, akataura neNetwork yeBosses, kuDudullu-Bostancı metro nzvimbo dzeIstanbul Metropolitan Municipality. Imwe yakadzingwa senge mwedzi mitatu yadarika, imwe [More ...]